विवाह, ब्रतबन्ध, जन्मदिन, नयाँ वर्ष या पूजाआजाका अरू अवसरमा आफ्नो ग्रह–नक्षत्र जान्न उत्सुक मानिसहरूको जिज्ञासा मेटाइदिने महिला ज्योतिषहरूले घरै बसी–बसी आकर्षक आम्दानी गरिरहेका छन् ।
आफ्नो कार्यालयमा ज्योतिष सुधा भट्टराई (बास्कोटा)।
काठमाडौं नयाँसडककी रतिले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ३० वर्षे सेवाकालमै वाल्मीकि विद्यापीठमा फलित ज्योतिष पढेकी थिइन् । तीन वर्षदेखि ज्योतिष पेशाका लागि कम्प्युटर खोल्न थालेकी उनी नेवारी दैनिक पत्रिका सन्ध्या टाइम्स मा नियमित राशिफल पनि लेखिरहेकी छन् । कतिपय मानिस त्यही राशिफल हेरेर थप परामर्शका लागि उनलाई खोज्दै आइपुग्छन् । “कर्मकाण्ड भनेको जीविकोपार्जन पनि हो”, अर्थशास्त्रमा एमए रति भन्छिन्, “यो विद्याले धेरै महिलालाई जागिर चाहियो भन्दै कसैको ढोकामा पुग्नु नपर्ने बनाएको छ ।”
एक महीनाअघि हिमाल सँगको कुराकानीमा वाल्मीकि विद्यापीठका उप प्राध्यापक पं. शिवराज सुवेदीले पछिल्लो समय फलित ज्योतिष पढ्ने महिलाको संख्या बढेको र तीमध्ये धेरैले यसलाई व्यवसाय बनाएकोमा प्रशन्नता व्यक्त गरेका थिए । “वाल्मीकिमा पढेकाहरू जर्मनी, अमेरिका लगायत विश्वका १६ देशका विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन्”, ११ माघमा देहावसान भएका पं. सुवेदीको गुनासो थियो, “व्याकरण र नेपालीको राम्रो ज्ञान भएका शिक्षक खोज्दै विद्यापीठमा आउनेहरूले खालीहात फर्किनु परिरहेको छ ।”
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत अहिले १४ आङ्गिक र पाँच सम्बन्धन प्राप्त गरी १९ विद्यापीठ छन् । यी विद्यापीठहरूमा संस्कृतसँगै अंग्रेजी, गणित लगायत १७ विषयको पढाइ हुन्छ ।